China Charmlite ပလတ်စတစ် BPA အခမဲ့ ၆၅၀ မီလီမီတာ - သံဘူးနှင့်အခြေခံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူရေပုလင်း | Charmlite
Charmlite ပလတ်စတစ် BPA အခမဲ့ ၆၅၀ မီလီမီတာ - ရေစိုခံနိုင်သောခွက်နှင့်အခြေအမြစ်
Charmlite ရေဘူးသည် BPA-free နှင့်အဆိပ်မရှိသောလုံခြုံစိတ်ချရသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်လုံးဝကျန်းမာနေကြောင်းစိတ်ချနိုင်ပါသည်။
သံမဏိ ဦး ထုပ်ကိုချွတ်ယွင်း, Ergonomics နှင့်စတိုင်ဒီဇိုင်း။ မည်သည့်နေရာ၌မဆိုယူဆောင်သွားရန်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစား၊ ခရီးသွားအဖော်အဖြစ်စုံလင်သည်။
Outdoors for Perfect - အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
သူတို့နှစ်သက်သောအဖျော်ယမကာကိုသင်သွားရင်းလမ်းလျှောက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ဖြည့်စွက်ရမည့်အရာမှာသင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ချောချောမွေ့မွေ့၊ နို့၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဆိုဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအဖျော်ယမကာကိုလောင်းပါ။
1. စွမ်းရည်: 22oz / 650ml
2. ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ် (PET)
ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည် option ကိုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ဝတ်စုံ။
Charmlite ရေဘူးသည်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီးစီးပွားရေးခရီးစဉ်အတွက်သင့်တော်သည်။ သင်ရထားပေါ်တွင်ထိုင်နေစဉ်ပုလင်းကိုစားပွဲပေါ်တင်ပါ၊ သင်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာသောက်နေစဉ်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့နေစဉ်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်ပါ။
Charmlite ပုလင်းနှင့်သင်၏သယ်ဆောင်နိုင်သောရေဓါတ်ဖြည့်ရွေးချယ်စရာများမှာအကန့်အသတ်မရှိ၊ ထို့ကြောင့်ရှေ့သို့သွားပြီး၎င်းတို့ထဲမှအကောင်းဆုံးကိုလုပ်ပါ။ အသက်ရှင်။ ထသောက်လော့။
350ml, 500ml, 800ml ရေဘူး
ရှေ့သို့ Charmlite 100% Tritan Stemless ဝိုင်ဖန်ခွက် Barware ဖန်ခွက် - ၁၆ အောင်စ
နောက်တစ်ခု: မြှင့်တင်ရေးအတွက် Lanyard နှင့်အတူ Charmlite စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ် 650ml ရေပုလင်း
Mason ဆို Jar ရေဘူး
Charmlite ကြည်လင်သောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော Stemless ရှမ်ပိန်တုပ်ကွေး ...
Charmlite LCD Display ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားရေတွက်ရန် ...
Charmlite BPA အခမဲ့အရောင်းရဆုံး OEM ၀ န်ဆောင်မှု Clear B ...
Straw And Lid ပါသော Cute Yard Slush ဖလား ...
Strawish ပျော်စရာ LED မီးလင်းဖလားသောက်သုံး Glow ဖလား ...